सम्झन लायकका क्षणहरु - शखदा साहित्य
Ramesh Basnet said...
तपाईका यी ऐतिहासिक फोटाहरु हेर्दा इष्र्याको अनुभूति भयो मलाई के गर्ने ? तपाईलाई अझ जान्ने मौका पाइयो ।
रमेसजी यो मानवीय स्वाभाव हो . मेरो विषयमा जान्न इच्छा भए सस्मरण पढनु भयो भने थाहा हुन्छ ।
माथिका सम्झनलायक फोटोहरुले मलाई पनि आत्मिक सन्तुष्टि मिल्यो यो सम्झनाको कोशे ढुंगोलाई मेरो सलाम शर्मिला दिदज्यू ............